Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Atlantika Kanada misokatra hamaky vaksiny mpandeha any Etazonia
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Taorian'ny fanambarana hisokafan'ny sisintany vaovao an'i Canada, hisokatra ho an'ireo mpandeha amerikana vita vaksiny tanteraka ny faritanin'i Atlantika Canada manomboka ny 9 aogositra 2021.
New Brunswick dia handray ireo mpandeha amerikana izay nahazo ny andiany vaksinin'ny COVID-19 rehetra izay eken'ny Governemanta Canada.
Manomboka amin'ny 9 Aogositra dia mahazo miditra ao Newfoundland sy Labrador ireo mpandeha amerikana vita vaksiny feno.
Manomboka amin'ny 9 Aogositra, ny mpitsidika amerikana mahafeno fepetra ho mpitsangatsangana vita vaksiny feno dia takiana amin'ny fangatahana hidirana ao Nova Scotia.
Faritany efatra ao Atlantika Kanada hisokatra ho an'ireo mpandeha amerikana vita vaksiny tanteraka manomboka amin'ny 9 aogositra 2021.
Any avaratry ny sisintanin'i Etazonia Maine, ny Atlantika Kanada dia faritra amoron-tsiraka tsy misy vahoaka ary misy ny faritany kanadianina efatra New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland & Labrador, ary Prince Edward Island.
Ny fisokafan'ny sisintany amin'ny tapaky ny volana aogositra dia ahafahan'ny mpandeha amerikana mankafy ny faramparan'ny fahavaratra any Atlantika Canada, izay manolotra toetrandro mahonena, rano amoron-dranomasina mafana, ary fitsangatsanganana an-kalamanjana. Ny fahalavoana dia mirehareha ravina mareva-doko sy festival ara-kolontsaina maro eran'izao tontolo izao. Mora azo avy any avaratra atsinanana, ny faritra dia manolotra morontsiraka mahatalanjona, hazan-dranomasina vaovao, toerana malalaka malalaka, traikefa an-tany sy rano, ary maro hafa.
Tsy maintsy mampiasa ny mpandeha rehetra ArriveCAN (app na vavahadin-tranonkala) handefasana ny mombamomba ny dia. Ankoatry ny fanarahana ny torolàlana momba ny dia federaly any Canada, ny faritany tsirairay ao Canada dia samy manana ny fameperana sy fepetra takiana mba hiarovana ny mponina amin'ny COVID-19. Satria miovaova isaky ny faritany ny kaikitry ny protokolita, ity ny zavatra tokony ho fantatry ny mpandeha momba ny fidirana amin'ny isam-paritany mba handrafetana ny asan'ny Atlantika Kanada manaraka.
Raha vantany vao misokatra ny sisintany federaly kanadiana amin'ny 9 aogositra, New Brunswick dia handray ireo mpandeha amerikana nahazo vaksinin'ny COVID-19 feno izay eken'ny Governemanta Canada.
Manomboka amin'ny 9 Aogositra dia mahazo miditra any Newfoundland & Labrador ireo mpandeha amerikana vita vaksiny feno ary takiana izy ireo handefa taratasy fitsangatsanganana ao anatin'ny 72 ora aorian'ny daty fitsangatsanganany ary hanaraka ny torolàlana momba ny fahasalamam-bahoaka mandritra ny fotoana ijanonany. Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny feno dia tsy voatery mitokana na hosedraina amin'ny COVID-19 rehefa tonga any amin'ny faritany izy ireo.